अभिनेत्री श्‍वेता खड्काले सोमबार विवाह गर्दै Canada Nepal
अभिनेत्री श्‍वेता खड्काले सोमबार विवाह गर्दै
काठमाडौं । नेपाल चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री श्वेता खड्का विवाह बन्धनमा बाधिँने भएकी छिन् । दसैँ तिहारको बीचमा उनको विवाह हुनेबारे धेरै नै चर्चा चलेको थियो ।
त्यस समय उनले धनगढीका युवकसँग विवाह गर्न लागेको चर्चा चलेको थियो । अब भने उनले यहि मंसिर २२ गते विवाह गर्ने भएकी छिन् । उनी विजयेन्द्रसिंह रावतसँग विवाह विवाह बन्धनमा बाधिने भएकी हुन् ।
विवाह कार्डमा लेखिए अनुसार उनको विवाह गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा मंसिर २२ गते हुने भएको छ । विवाहको कार्यक्रम फरेस्ट रिसोर्टमा विहानैदेखि सुरु हुनेछ । यसअघि उनले २०७१ साल असार २३ गते श्रीकृष्णसँग विवाह गरेकी थिइन् ।
तर बिहे गरेको एक महिना नबित्दै उनल्े श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई गुमाएकी थिइन् । श्रीकृष्णको साउन २५ गते नै निधन भएको थियो । चलचित्र कहाँ भेटिएला’बाट नेपाली चलचित्रमा प्रबेश गरेकी उनी चलचित्र कान्छी निर्माण गरेर चलचित्र क्षेत्रमा कमब्याक गरेकी थिइन् ।
मंसिर १७, २०७७ बुधवार २२:११:१२ बजे : प्रकाशित
पुराना छायाँकार प्रधानको निधन
काठमाडौं - नेपाली चलचित्र क्षेत्रका पुराना छायाँकार राम शंकर प्रधानको निधन भएको छ । उनको आइतबार बेलुका ७२ बर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।
लामो समयदेखि डायलासिस गराउँदै आएका उनको वीर अस्पतालमा निधन भएको हो । उनको सोमबार बिहान पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको जनाइएको छ ।
उनले सुन्दर मेरो नाम, फेरि तिम्रो याद आयो, लगनगाँठो लगायतका धेरै नेपाली चलचित्रको छयांकन गरेका थिए । उनको निधनप्रति नेपाली चलचित्र क्षेत्रका कलाकारहरुले दुख व्यक्त गरेका छन् ।
जेठ ३१, २०७८ सोमवार १८:४४:०८ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । बेलायतमा बस्दै आएकी नेपाली मोडल अनिता लिम्बुले बहुचर्चित ‘आई टिभी टू’ च्यानलबाट प्रशारण हुने रियालिटी शो ‘सिक्रेट क्रस’मा सहभागिता जनाएकी छन् ।
सामाजिक सञ्जाल इन्ष्टग्राममा उनको कौशल देखेर आयोजक टिमले नै उनलाई उक्त शोमा भाग लिन आग्रह गरेको थियो । आयोजकको आग्रहपछि उनी उक्त शोको यात्रा तय गरेकी थिइन् ।
उक्त रियालिटी शो आई टिभी टू च्यानलमार्फत गत हप्ता प्रसारण भएको छ । आई टिभी हब मार्फत उक्त कार्यक्रम जुनसुकै समयमा पनि हेर्न सकिनेछ । नेपालको ताप्लेजुङमा जन्म भई इटहरीमा हुर्केकी उनले सानै उमेरदेखि मोडलिङ र डान्सिङमा दिलचस्पी राख्ने गरेकी थिइन् ।
नेपालमा कक्षा १२ अध्ययन सकेर अध्ययनको शिलशिलामा बेलायत पुुगेकी उनले त्यहाँ ब्यूटी थेरापी सम्बन्धी अध्ययन पूरा गरिसकेकी छिन् । बर्हिगमको एक फेशन शोबाट मोडलिङ शुरू गरेकी उनले अक्सफोर्ड फेशन विक र लण्डन फेशन शो मा पनि भाग लिइसकेकी छिन् ।
यस्तै अनिताले लण्डनमा आयोजना हुने प्राय फेसन–शो तथा मिस च्यारिटी लगायतका व्युटी कन्टेस्टहरुमा समेत भाग लिएर विभिन्न टाइटल अवार्ड जितिसकेकी छन्। ५ फिट ७ इञ्च उचाईकी अनिता डान्समा पनि अब्बल रहेकी छन्। लण्डनमा हुने विभिन्न च्यारिटी शोहरुमा डान्स गरेर धेरै सहयोग जुटाइसकेकी छन ।
उनले धेरै नेपली म्युजिक भिडिओमा पनि अभिनय गरिसकेकी छिन ।नेपाली फिल्म अभिनयमा पनि आफ्नो रुचिको बिषय भएको बताउने उनी भविष्यमा चलचित्रमा अभिनय गर्ने सोच रहेको बताउँछिन् ।
आषाढ १, २०७८ मंगलवार ११:२४:०८ बजे : प्रकाशित
# सिक्रेट क्रस
मुन्द्रेलाई दीपकराजले भने - कहिले काहिँ मतभेदका छालहरू एकअर्कासँग ठोक्किए पनि हाम्रो गति कहिले रोकिदैन
काठमाडौं - चर्चित हास्यकलाकार जितु नेपालको आज जन्मदिन परेको छ । उनी आजबाट ४६ वर्षमा लागेका छन्। उनको जन्मदिनको अवसरमा कलाकार दीपकराज गिरीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
दीपकराजले शुभकामना दिदै घुमाउरो शैलीमा मतभेद स्वीकारेका छन् । टेलिभिजन शो मुन्द्रेको कमेडी क्लब चलाउदै आएका जितुले ‘महानायक’ विवादपछि दीपाश्रीलाई अध्यक्षबाट हटाएर करिश्मा मानन्धरलाई राखेका थिए ।
त्यस बेलादेखि दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौला समुहसँग जितुको सम्बन्ध चिसिएको थियो । जितुले यस समुहसँग फिल्म ‘६ एकान ६’ देखि पछिल्लो फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ सम्म काम गर्दै आइरहेका छन् ।
मंगलबार जन्मदिनको अवसरमा दीपकराजले मतभेद रहेको स्वीकार गर्दै आफूहरुको गति कहिले नरोकिने बताएका छन् । उनले कहिले काहिँ मतभेदका छालहरू एकअर्कासँग ठोक्किए पनि आफूहरुको गति कहिले नरोकिएको र नरोकिने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन् - 'तपाइ संग जे छ ,त्यो म संग छैन ! म संग भएका तपाइ संग नहुन सक्छ !! सायद यहि एक अर्को संग नभएका कुरा अैचो पैचो गर्दै एउटै खोलामा मिसियौ र बग्दै गयौ निरन्तर कहिलेकाहि हाम्रा मतभेदका छालहरू एक अर्को संग ठोक्किए पनि हाम्रो गति कहिले रोकिएन र रोकिदैन पनि !!'
'तपाइ लाइ इश्वरले सधै उस्तै उर्जाशील र शृजनशील बनाइ रहुन् तपाइ संग भएका सकारात्मकताले तपाइमा भएका कमि कमजोरीलाइ परास्त गर्न सकोस! घर परिवारमा सुख शान्ति रहि रहोस !! जय मित्रता!! जन्मदिनको लाखौ करौडौ शुभकामना!!!'
आषाढ १, २०७८ मंगलवार १५:११:४६ बजे : प्रकाशित